Adepero Oduye wuxuu ka mid noqon doonaa jilaaga wax soo saarka ee Hurricane Katrina ee TV-ga Apple + | Waxaan ka socdaa mac
Adepero Oduye wuxuu ka mid noqon doonaa jilayaasha wasaqda yar yar ee ku saabsan Hurricane Katrina ee Apple TV +
Bilowgii Sebtembar, waxaan daabacnay maqaal la xiriira mid ka mid ah mashaariicda mustaqbalka ee Apple ee loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee qulqulka, mashruuc la xiriira Duufaanta Katrina oo sii mareysa magaalada New Orleans ku saleysan ciwaanka Shan maalmood Xuska by Qoraaga Ku guuleysta Abaalmarinta Pulitzer Sheri Fink.
Musalsalkan, waxaa jilaya John Ridley iyo Carlton Cuse, waxaa jilaya aktarada Adepero Oduye, oo caan ku ah doorkeeda taxanaha cusub ee Disney + Falcon iyo Askariga Jiilaalka, sida laga soo xigtay ragga ka socda Hollywood Reporters. Oduye turjumi doonaa ayaa la ciyaari doonta kalkaaliyaha madaxa ee Isbitaalka Memorial kaasoo waliba agaasima guddiga anshaxa ee isbitaalka.
Oduye kasbaday Abaalmarinta Ruuxa iyo magacaabista Abaalmarinta Sawirka NAACP doorkeeda Sky, 2011. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa taxanaha Sidan ayey noo arkaan ka yimid Netflix, Magnolias bir ah Filim nololeed iyo muuqaal Carmallada y Gaabnaanta Badan.
Shan maalmood Xuska ayaa ka sheekeyneysa dhibaatadii ka dhalatay duufaantii Katrina marka laga eego cusbitaalka New Orleans Memorial Hospital. Iyada oo ku saleysan sheeko ay qortay Sheri Fink oo ku guuleysatay abaalmarinta Pulitzer Prize, taxanahan ayaa si qoto dheer u galaya dhibaatooyinka anshaxa iyo anshaxa ee jilayaashu wajahayaan inta lagu jiro imtixaanka.
Kaalinta hoggaamineed ee taxanahan waxaa jilaya Vera farmiga, doorka Anna Pou oo lagu eedeeyay euthanize bukaannada halista ah kadib markii aad cisbitaalka ku jirtay dhowr maalmood.
Soo-saarista meerisyadan ayaa mas'uul ka noqon doona Fink, halka Ridley iyo Cuse, ka sokow inay yihiin agaasimayaasha, ay sidoo kale Waxay u dhaqmi doonaan sidii qorayaal shaashad iyo soo saare fulineed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Adepero Oduye wuxuu ka mid noqon doonaa jilayaasha wasaqda yar yar ee ku saabsan Hurricane Katrina ee Apple TV +
Jabsashada Facebook, kordhinta RAM-ka Mac-yada leh M1 iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac